Black သောကြာနေ့တွင်အကောင်းဆုံးအိမ်သုံးအလိုအလျောက်အရောင်းအ ၀ ယ် Gadget သတင်း
El Black ကသောကြာနေ့ ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ကျနော်တို့ဒီဟာကိုထူးခြားတဲ့နည်းနဲ့ချဉ်းကပ်ချင်ခဲ့တယ်၊ ငါတို့ရည်ရွယ်ထားတာကဒီအနက်ရောင်သောကြာနေ့မှာရောင်းချနေတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုသင့်ရဲ့အရောင်းအ ၀ ယ်တွေကိုမတူညီတဲ့ကဏ္inတွေမှာအကြံပြုဖို့ဖြစ်တယ်။ ဘဝဟာပိုလွယ်တယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသောအသံနှင့်အသံထုတ်ကုန်များကဏ္ section ကိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် ယေဘုယျအားဖြင့်။
ဒီနှစ် 2019 ဟာစမတ်အိမ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အိမ်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့မည်မှာသေချာသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သင့်အားအကောင်းဆုံးသောအိမ်အလိုအလျောက်ထုတ်ကုန်များစုဆောင်းခြင်းကိုယူဆောင်လာသည်။ ထို့ကြောင့်သင်က Black သောကြာနေ့ရောင်းအားဖြင့်အသစ်တစ်ခုကိုကြိုးစားစမ်းကြည့်နိုင်သည်။
2 Philips မှ Hue အကွာအဝေး
3 Sonos Beam ကို
Controller နဲ့စတယ်။ virtual assistant ကောင်းကောင်းရဖို့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အိမ်တစ်လုံးရှိဖို့လိုတယ်။ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအဆင့်တွင်မလိုအပ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းကိရိယာများ၏အားသာချက်ကိုရယူခြင်းသည်မည်မျှရိုးရှင်းပါသည်။ အဘယ်သူသည်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်သူကဒီအနက်ရောင်သောကြာနေ့အထူးသဖြင့်အထူးလျှော့စျေးရှိသည်သောအမေဇုံနှင့်၎င်း၏ Echo ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံကိုအများဆုံးဖမ်းယူခဲ့သောကြောင့်စတင်ရန်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးနှစ်ခုမှာတိကျသော Amazon Echo3နှင့် Amazon Echo Two တို့ပါ ၀ င်သည့်နာရီပါ ၀ င်သည်။
ပဲ့တင်သံအစက် built-in နာရီနှင့်အတူထိရောက်သောနာရီ, နှိုးစက်နာရီနှင့် Alexa နှင့်အတူစပီကာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတွင်မိုက်ခရိုဖုန်းလေးလုံးနှင့်နှိုးစက်တစ်ခု၊ ပတ်ဝန်းကျင်အသံတစ်ခုသို့မဟုတ်ရေဒီယိုသို့မဟုတ် podcasts များပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်းအတွက်လုံလောက်သောအသံရှိသည်။ အခုအချိန်မှာတော့သူကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုထက်ပိုပါတယ်။ သူ့ရဲ့ပုံမှန်ဈေးနှုန်းကယူရို ၆၉.၉၉ ပါ အမေဇုံက Black Friday ကိုအားသာချက်ယူပြီး ၃၄.၉၉ ယူရိုဖြင့်အခမဲ့ရောင်းချပေးသည်။ ယူနစ်များကိုရောင်းလိုက်ပြီးအမိန့်များသည်ဤအကြောင်းကြောင့်နှောင့်နှေးနိုင်ခြင်းကြောင့်ယခုအားသာချက်ကိုယူပါ။
built-in နာရီနှင့်အတူ Amazon Echo Dot3ကိုဝယ်ပါ
မကြာသေးမီကပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်မရှိမဖြစ်လုနီးပါးဖြစ်လာပြီးသောအခြားထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည် Amazon Echo 3. အမေဇုံ၏စပီကာသည်အရောင်ငါးမျိုးနှင့်အရွယ်အစားကြီးထွားလာခြင်းနှင့်စွမ်းအင်နှင့်မိုက်ခရိုဖုန်းများတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်အသံပမာဏပိုမိုကျယ်လာသည်။ ဒီစပီကာဟာပုံမှန်အရွယ်အစားရှိတဲ့အခန်းတွေအတွက်လုံလောက်ပါတယ်။ အကွာအဝေးမှာရှိတဲ့ထုတ်ကုန်အားလုံးလိုပဲ Amazon's Alexa ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမဟုတ်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အထူးလျှော့စျေးထက်ပုံမှန်အားဖြင့်ယူရို ၉၉.၉၉ မှ ၆၄.၉၉ ယူရိုအထိရှိသည်။
Amazon Echo 3rd Generation ကိုဝယ်ပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်လည်းသူ့ကိုပစ်နိုင်ပါတယ် Amazon Echo ၏အကွာအဝေးကိုကြည့်ပါ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာပြီးဖြစ်သောအသံထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးနှင့်အခြားအချို့ကိုတွေ့လိမ့်မည်။
Philips မှ Hue အကွာအဝေး
ကျွန်ုပ်တို့တွင် Philips Hue အကွာအဝေးကိုစောင့်ကြည့်နေသောကောင်းမွန်သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်သင်ခန်းစာများရှိနေသေးသည်။ အကြောင်းမှာထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုကြိုးစားပြီးပြီးနောက်ကျွန်ုပ်အိမ်၌ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသောအလင်းစနစ်သည်ကိုယ်ပိုင်အိမ်ဖြစ်သည်။ koo geek (ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ), lifx (ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ) နှင့် နာနို (ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်အခြားအမှတ်တံဆိပ်အကြား) ။ Philips သည်အမျိုးမျိုးသောရိုးရှင်းလွယ်ကူမှုအတွက်ကတိက ၀ တ်ပြုထားသည်။ သင်သည်သင်၏ starter kit ကိုရရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်သည်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးနှင့်မီးသီးအမျိုးမျိုးရှိလိမ့်မည်။ \_ t မီးအိမ်, LED strips တွေ ...
၎င်းတို့သည်သင့်အားလွယ်ကူသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ အမြဲတမ်းထိရောက်သောလည်ပတ်မှုများကိုခွင့်ပြုထားပြီး၎င်းတို့သည်အရောင်းအ ၀ ယ်များစွာတွင်ရောင်းချပြီး၎င်းသည်သင်ကသောကြာနေ့အတွက်မတူညီသောပံ့ပိုးသူများထံမှမယုံနိုင်လောက်သောကမ်းလှမ်းမှုများကိုရှာဖွေစေသည်။ ယူရို ၄၉.၉၀ ကျသင့်မည့်ဤ starter ကိရိယာအစုံဖြင့်သင်စတင်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်အကြံပြုပါသည်s ကို (link ကို) ဒါမှမဟုတ်အမေဇုံပဲ့တင်သံပြကွက်ရဲ့ ၅ ခုကဒါ ကျနော်တို့အဲဒီအချိန်ကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, \_ t ၆၄.၉၉ ယူရို ၂ လုံးဖြင့်မီးသီးနှစ်လုံးပါ ၀ င်သည်။ ရူးသွပ်မှု၏တကယ့်စျေးနှုန်းကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။).
Sonos Beam ကို
၎င်းသည်ရုပ်မြင်သံကြားအတွက်အသံဘားတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်တေးဂီတအတွက်ပြည့်စုံသောအသံစနစ်၊ ၎င်းသည် Alexa, Google Home နှင့် Home Kit နှင့်လိုက်ဖက်သောစပီကာဖြစ်သည်။ ဤ Sonos Beam သည်အပြည့်စုံဆုံး Sonos ထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ပစ်လွှတ်ကတည်းကငါတို့နှင့်အတူချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌တည်၏။ ဤသည် Beam ကိုသွင်ပြင်လက္ခဏာများ4ဘဲဥပုံပုံ woofers Full-range frequency တုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူ သုံး passive ရေတိုင်ကီ နိမ့်ဆုံးပုံပျက်ကမ်းလှမ်းခြင်းအားဖြင့်ဘေ့ output ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် တွစ်တာ သော Sonos Beam ကိုအသံဘားကိုခေါ်ရန်လုံးဝလိုအပ်ပေသည်။
Sonos Beam ကိုဝယ်ပါ
တစ်ခုရှိလား။ ကောင်းပြီ၊ Black Friday သည်အခြား smart ကဲ့သို့သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်၎င်းကိုဖြည့်ဆည်းရန်အချိန်ကောင်းသည်မှာသေချာသည် Sonos တစ်ခုမှာ။ La Alexa, Spotify Connect နှင့် AirPlay2နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည် ဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ရှိမီးသို့မဟုတ်အခြားသဟဇာတဖြစ်သောကိရိယာများကိုပင်စီမံခန့်ခွဲရန်အကောင်းဆုံးစနစ်တစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်မြင်သံကြားအတွက်အသံအရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် living ည့်ခန်းအတွင်းအခြားမည်သည့်စက်ပစ္စည်းကိုမဆိုထည့်ရန်မလိုအပ်။ ထိုသို့လုံးဝသတိမပြုမိသွားပါလိမ့်မယ်။ Sonos မှယနေ့အထိဖြန့်ချိခဲ့သည့်အကောင်းဆုံးနှင့်အပြည့်စုံဆုံးဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုမှာ ၃၆၈.၉၉ ယူရိုဖြစ်သည်။ တရားဝင်တရားဝင်စျေးနှုန်းမှာ ၄၄၉.၉၉ ယူရိုရှိသောကုန်ပစ္စည်းအတွက်စျေးနှုန်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့၏တရားဝင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်လည်း၎င်းတို့သည်နောက်ထပ်အထူးလျှော့စျေးများရလိမ့်မည်။ သင်ရောင်းနေသောဥရောပကုမ္ပဏီမှဤအလွန်ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်ကုန်ကိုသင်မည်သို့ထင်သနည်း။
ယခုငါအရေးအသားမှတဆင့်သွားကြပြီသောသူတို့နှင့်ဤအနက်ရောင်သောကြာနေ့များအတွက်အထူးအထူးလျှော့စျေးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအံ့သြသွားကြဖို့တတ်နိုင်ဖြစ်သူတို့ကိုသင်သိရန်ကောင်းသောနေဆဲကြောင်းထုတ်ကုန်အချို့ကိုသင်အကြံပြုသွားပါလိမ့်မယ် ဒီစျေးကွက်အတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုကဘာလဲဆိုတာ၏စိတ်ကူးကိုရယူပါ။ ငါနဲ့စချင်တယ် SYMFONISK မှ IKEA x Sonos မှအကွာအဝေး ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိဘောဂများနှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အနီးဆုံး IKEA စတိုးဆိုင်များတွင် Sonos ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်ကောင်းမွန်သောအသံအရည်အသွေးအားလုံးကိုပေါင်းစပ်ပေးသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ 99 ယူရိုကနေ။
နောက်ဆုံးသတိရပါ Koogek ၎င်းသည် Apple HomeKit နှင့် Amazon Alexa နှင့် Google Assistant တို့နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိခြင်းအတွက်ငွေအတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးကိုပေးသောအမှတ်တံဆိပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားအားလုံးရှိသည်။
ဤရွေ့ကား, အိမ်မှာအလိုအလျောက်၌အကြှနျုပျတို့၏အကြံပြုချက်များခဲ့ပေမယ့် လက်တဆုပ်စာအနည်းငယ်ကိုတွေ့လိမ့်မည် ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနေကြသည်နှင့်ဤအနက်ရောင်သောကြာနေ့နှင့်အနာဂတ်ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့များအတွက်အထူးလျှော့စျေးအပေါ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူစပိန်ဘာသာ၌အကောင်းဆုံးသောနက်ရှိုင်းသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်အကောင်းဆုံးစားသုံးသူအီလက်ထရွန်နစ်စုစုပေါင်းစာရင်းရှိနိုင်သည်ကိုသတိရပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Black သောကြာနေ့တွင်အကောင်းဆုံးအိမ်အလိုအလျောက်အရောင်းအ ၀ ယ်
ဂုဏ်ပြုသည့် Magic Watch2တင်ဆက်သည်